Hotera Minibar Fekitori, Vatengesi - China Hotera Minibar Vagadziri
Hotel Kubvisa Minibar M-25A
Kubvisa Minibar kunowanikwa mune akasiyana hunyanzvi kukodzera yako kabati zvinokodzera. Vanouya vakakwana nemwenje ye LED yemukati pamwe nekukiya kwemhando. Izvo zvakagadzirwa uye zvakavakirwa kuti zvigare. Kutenga Kubvisa Minibar M-25A ndeyekugara kwenguva refu muhunhu. Imwe neimwe inovakwa kuti irambe yakakwasharara, kushandiswa kwezuva nezuva uye kupedza hupenyu hwekugadzwa.
Hotel Kubvisa Minibar M-30A
Saizi yavo diki inovabvumira kuti vaiswe chero kupi, kusanganisa kana pasi penzvimbo dzekushandira dziripo.
Yakakwana yemahotera emakamuri ehotera, mini mabara ari kuwedzera mukuzivikanwa nesarudzo dzinosanganisira "No Noise" uye nyowani kumusika, kupisa pombi tekinoroji.
Hotel Kubvisa Minibar M-40A
Kubvisa Minibar M-40A inopa inotonhorera kutonhora tembiricha ye5 ° C kusvika 8 ° C. Yakanakira kuchengetedza zvinwiwa uye zvinwiwa, iyi 40 litre mini firiji ine inoshanda inoshanda yakanyarara yakanyarara
Chitupa: CE / RoHS
Hotera uye Kumba Kushandisa Kubvisa Minibar M-50A
Zvese zvikamu zvepurasitiki zvinogona kudzokororwa uye kushandiswazve. Stainless, zvinhu zvisina ngura uye nyore kushandisa switch yemagetsi inoita iyi minibar chinhu chinodikanwa chekamuri yega yega yehotera. Bato racho rakabatanidzwa mumusuwo kuchengetedza nzvimbo uye kubvumira firiji kuti irambe ichivhurwa nekumhanyisa kumhanya kufamba.
Dhizaini Dhirowa Minibar M-45C
Iyo yakashongedzwa dhirowa minibar inopa vashanyi vako nyore kuwana kune yakanyanyisa kutonhora zvinwiwa. iyo nyowani Peltier cell technology inopa kutendeseka kwakanakisa uye simba rehupfumi uye yakanyarara ichishanda. Iyo minibar ine yakanakisa yekuchengetedza mukati merodhi inokwanisa kuchengeta ese mabhodhoro uye magaba. Iko kune yemukati mwenje mwenje yekuratidza zvigadzirwa uye yakashongedzwa inoratidzirwa nhema pani yemusuwo inokwana zvakanaka mune chero mhando yemidziyo.